Efa loza mihatra : rava ny harena voajanahary | NewsMada
Efa loza mihatra : rava ny harena voajanahary
Nanomboka ny taona 2012, miasa eto amintsika ny Waves*, tetikasa iray an’ny Banky iraisam-pirenena, manisa ireo harena voajanahary eto an-toerana. Anaovana izany asa sarotra izany ny ala sy ireo harena rehetra ao aminy, rano, harena an-kibon’ny tany, harena an-dranomasina ary ny fizahantany. Ilaina ny hahafantarana ny antontanisa mazava momba ireo hanatsarana na hanitsiana ny fitantanana. Harena mety ho fongana daholo ireo, amin’ny tsy fitandremana sy tsy fanarahan-dalàna rehetra hita, araka ny fanazavan’ny teknisianina ao amin’ny Waves. Efa karazana loza mihatra izany eto amintsika, raha ny fahitana ny faharavan’ny tontolo iainana sy ny manodidina.
Noho izany, voafidy ho anisan’ny firenena fito anaovana io fanadihadiana lalina io i Madagasikara. Miainga avy amin’ny famantarana ireo ny hamolavolana ny politika ara-toekarena. Raha manomboka tsy ampy ny rano ; raha mitady ho lany ny harena an-kibon’ny tany, izay tsy azo avaozina intsony ; raha mitohy ny fahapotehan’ny ala ; raha mihafongana ireo harena anaty ranomasina … Raha mitohy ireo rehetra ireo, ahoana ny fanitsiana ny fitantanana rehetra ? Efa fantatra, hatry ny ela, ny fasimban’ny ala, saingy tsy hita izay tena fepetra noraisina mifandraika amin’izany, ohatra, ny fikajiana ny vidin’ny angovo hafa mba ho takatry ny rehetra.
Eto Madagasikara manokana, miankina amin’ireo harena voajanahary rehetra ireo ny ampahany be indrindra amin’ny fampandrosoana. Rano, ohatra, ny fambolena miantoka ny foto-piveloman’ny maro anisa ; amin’ny maha Nosy antsika, firifiry ny mivelona amin’ny jono an-dranomasina ? Ireo sambo lehibe mpanjono, miditra amin’ny fari-dranomasina tsy tokony hidirana, saingy toa mitazam-potsiny ny fanjakana. Hambara min’ny volana jona ho avy izao ny vokatry ny fanisana ireo harena ireo.
Ankoatra ireo efatra ireo, harena hafa ihany koa ny fotodrafitrasa, ny vola mihodina rehetra ary indrindra, ny olombelona sy fahaizany. Mifampiankina daholo ireo mba hisian’ny tena fampandrosoana. Fatiantoka ho an’ny firenena sy ny taranaka any aoriana raha maro tsy tambo isaina ny harena mivoaka, nefa tsy nahavitan’ny fanjakana fotodrafitrasa. Kely loatra ny fampiasam-bola eto. Ary efa mihamitombo izao ny zaza tsy tafiditra an-tsekoly, tanora tsy mahita asa, sns.
Waves* : Wealth accouting and valuation of ecosystem services